ပင့်ကူ ကြောက်ပေမယ့်­ Spider Man ဇာတ်ကားတော့ ကြိုက်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့ ဖြိုးပြည့်စုံ
Spider Man ဇာတ်ကားတော့ ကြိုက်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့ ဖြိုးပြည့်စုံ
2 May 2018 . 2:30 PM
ပင့်ကူကိုကြောက်ပေမယ့်­ Spider Man ဇာတ်ကားတော့ ကြိုက်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့ ဖြိုးပြည့်စုံ
လရိပ်ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးနဲ့ ပရိသတ်ထဲရင်ထဲကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ အဆိုတော်ဖြိုးပြည့်စုံနဲ့ တွေ့ဆုံခိုက်သူ့ကြောက်တတ်တဲ့ တိရစ္ဆာန်အကောင်ကို သိပါရစေလို့မေးမြန်းခဲ့တဲ့ အခါ အခုလိုဖြေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုဖြိုးပြည့်စုံ မှာ ကြောက်တက်တဲ့ တိရစ္ဆာန်အကောင်ရှိရင်သိပါရစေ?
“ကျွန်တော်ကြောက်တဲ့ အကောင်ကလေ အင်းဆက်လို့ပြောရမယ်ပေါ့လေ။ အမှန်တကယ်တော့ ကြောက်တဲ့ အကောင် အကြောင်းကိုပြောလေ့တော့မရှိပါဘူး။ မေးလာတော့လည်း ပြောရတော့မှာပေါ့လေ။အင်းဆက်တွေထဲက ပင့်ကူ ကို အရမ်းကြောက်ပါတယ်။ ပင့်ကူကိုဘယ်လိုတောင်ကြောက်တာလဲ ဆိုတော့ ပင့်ကူသေးသေးလေးတွေကိုတောင်ကြောက်ပါတယ်။
ကလေးဘဝ ကဆိုရင် အဖွားတွေရဲ့ အိမ်က အိမ်ဟောင်းကြီးပေါ့လေ အဲ့မှာ ကျွန်တော်အိမ်သာတက်ချင်လာရော အိမ်သာကလည်း အိမ်ရဲ့နောက်ဖေးမှာ ဆိုတော့ ကြပ်ခိုးတွေလည်းရှိတာပေါ့လေ။ ကိုယ်ရောက်တဲ့ အချိန်မှာပဲ ပင့်ကူကလည်းလက်တစ်ဝါးလောက်ရှိတဲ့ဟာ ကို တွေ့ပြီး အိမ်သာတောင်မတတ်နိုင်ဘဲ ဝမ်းချုပ်သွားတဲ့ အခြေအနေအထိတောင်ရောက်ခဲ့ဖူးပါတယ်” ဆိုပြီး သူကြောက်တဲ့ ပင့်ကူအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဆိုရင် Spider Man ဇာတ်လမ်းကိုရောမကြည့်ဘူးလား?
“Spider Man ဇာတ်လမ်းတော့ကြည့်ပါတယ်။ အဲ့လိုရုပ်ရှင်ကားတွေကိုလည်းသဘောကျပါတယ် ဒါပေမယ့် အပြင်မှာ လက်တွေ့ဆိုရင်တော့ ပင့်ကူကို ကြောက်ပါတယ်” ဆိုပြီး ပင့်ကူကိုကြောက်ပေမယ့်လို့ Spider Man ဇာတ်လမ်းကိုတော့ သဘောကျတယ် ဆိုတာကိုလည်းပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Photo Credit:Phyo Pyae Sone Facebook
ပငျ့ကူကိုကွောကျပမေယျ့­ Spider Man ဇာတျကားတော့ ကွိုကျပါတယျလို့ပွောခဲ့တဲ့ ဖွိုးပွညျ့စုံ
လရိပျဆိုတဲ့ သီခငျြးလေးနဲ့ ပရိသတျထဲရငျထဲကိုဝငျရောကျခဲ့တဲ့ အဆိုတျောဖွိုးပွညျ့စုံနဲ့ တှဆေုံ့ခိုကျသူ့ကွောကျတတျတဲ့ တိရစ်ဆာနျအကောငျကို သိပါရစလေို့မေးမွနျးခဲ့တဲ့ အခါ အခုလိုဖွပေေးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ကိုဖွိုးပွညျ့စုံ မှာ ကွောကျတကျတဲ့ တိရစ်ဆာနျအကောငျရှိရငျသိပါရစေ?
“ကြှနျတျောကွောကျတဲ့ အကောငျကလေ အငျးဆကျလို့ပွောရမယျပေါ့လေ။ အမှနျတကယျတော့ ကွောကျတဲ့ အကောငျ အကွောငျးကိုပွောလတေ့ော့မရှိပါဘူး။ မေးလာတော့လညျး ပွောရတော့မှာပေါ့လေ။အငျးဆကျတှထေဲက ပငျ့ကူ ကို အရမျးကွောကျပါတယျ။ ပငျ့ကူကိုဘယျလိုတောငျကွောကျတာလဲ ဆိုတော့ ပငျ့ကူသေးသေးလေးတှကေိုတောငျကွောကျပါတယျ။
ကလေးဘဝ ကဆိုရငျ အဖှားတှရေဲ့ အိမျက အိမျဟောငျးကွီးပေါ့လေ အဲ့မှာ ကြှနျတျောအိမျသာတကျခငျြလာရော အိမျသာကလညျး အိမျရဲ့နောကျဖေးမှာ ဆိုတော့ ကွပျခိုးတှလေညျးရှိတာပေါ့လေ။ ကိုယျရောကျတဲ့ အခြိနျမှာပဲ ပငျ့ကူကလညျးလကျတဈဝါးလောကျရှိတဲ့ဟာ ကို တှပွေီ့း အိမျသာတောငျမတတျနိုငျဘဲ ဝမျးခြုပျသှားတဲ့ အခွအေနအေထိတောငျရောကျခဲ့ဖူးပါတယျ” ဆိုပွီး သူကွောကျတဲ့ ပငျ့ကူအကွောငျးကိုပွောပွခဲ့တာလညျးဖွဈပါတယျ။
ဒါဆိုရငျ Spider Man ဇာတျလမျးကိုရောမကွညျ့ဘူးလား?
“Spider Man ဇာတျလမျးတော့ကွညျ့ပါတယျ။ အဲ့လိုရုပျရှငျကားတှကေိုလညျးသဘောကပြါတယျ ဒါပမေယျ့ အပွငျမှာ လကျတှဆေို့ရငျတော့ ပငျ့ကူကို ကွောကျပါတယျ” ဆိုပွီး ပငျ့ကူကိုကွောကျပမေယျ့လို့ Spider Man ဇာတျလမျးကိုတော့ သဘောကတြယျ ဆိုတာကိုလညျးပွောပွခဲ့တာဖွဈပါတယျ။